SANTOSH PAUDEL'S BLOG : September 2013
एउटा आकाश आउँछ
फिक्का जुन बोकी
अध्याँरा रात चिर्न
पसिना भित्र उछिट्टिएका दिन
'खुशि' अनि अर्कै 'जीवन'
अवश्य एउटा आकाश आउँछ
चम्काउन धर्तीमा छरिएका ताराहरू
आफ्नै ल्याकतमा उडेर
चन्द्र छुन नखोज्नेहरूलाई
नउफ्रि ! धर्ति छाड्न खोज्नेहरूलाई
एउटा आकाश आउछ
थोपा बटुलि वर्षा भई
र, उमार्छ पुन: खोसिएका रहरहरू
लुकाउछ सबैका हृदयमा प्रेम
छोप्छ दुनियाँका कू-धार, कू-दृष्टि
सुनौला दिन बोकेर
लेराउछ प्रीतिका गीत
बोराका बोरा खुशी
अवश्य, एउटा आकाश आउछ
लेराउछ लुटेका अस्मीताहरू
र, फैलाउछ वताससँगै न्यायका झोक्काहरू !
उदाउछ अर्को सुर्य
छर्छ शान्तिका रापहरू
दिन्छ अर्का उज्याला दिन
अनि, पत्याउने छैनौँ
'देखेर- त्यो दिन'
Posted by Santosh Paudel at 3:49 AM No comments: Links to this post
सरकार ! मान्छे कमिला होइन ?
२०५८ सालतिरको कुरो ।
त्यसबेला म कक्षा ७ मा पढ्थे । बहिनी ४ कक्षामा । घरमा आमा, बहिनी र म थियौँ । बा र दाईदिदी शहरमा बस्थे । दाइदिदी उतै जन्मेका रे ! आमा सुनाउथिन् । हामी पनि जन्मेको त उतै हो रे ! तर बाल्यकाल भने गाउंतिर वितायौँ । अब त के शहराँ जन्म्या भन्नु ? आमा सर्माउथिन् ।
गाउंको जग्गा कमाउन (कमाउदै आएको मान्छेले) छाडेपछि जग्गाको माया लागेर आमा गाउ पसिन । दुख गर्न, पसिना खसाल्न । हामि सानै थियौँ । आमाको न्यानो काख छाड्न नमान्ने । त्यहिभर बहिनी र म आमासंगै गाउ पस्यौँ । गाउतिरै हुर्क्यौँ, पढ्यौँ । तर, दाईदिदी भने यतै शहरमा पढे, हुर्के ।
साउनतिरको बेला हुनुपर्छ । ठुलो झरी पर्यो । गाउले थाम्नै नसक्नेगरी । तल्लो डांडातिरको दश बाह्रवटा बारीका पाटा बगे । शिरबोटेको पाखो खस्यो । सल्लेनितिरका सल्लाका रूख ढले र माटोसंगै बगे । खहरे थर्काउदै सुनकोशितिर जोरि खेल्न दौडियो । भलका जुल्फि उचाल्दै ।
धन्न गांऊ भने बगेन । कसैका घर बगेनन् । गाउले यसैमा खुशी देखिन्थे ।
तर, बहिनी र म भने खुशी थिएनौँ । झरि पर्नु अघि कार्किबारी डांडाबाट बटुलेका स-साना कमिला बहिनीले थैलिमा जम्मा गरेकि थिइ । घरमाथिको बाटाका खुड्किला, आंटको बोट मुन्तिर हामि कमिलाको घर खेल्थ्यौँ । जुज्यालाका भाटा ठड्याएर सतिबेरका पात माथिबाट बिछ्याएको झुप्रो भित्र ।
मसिनो पानि केहिबेरदेखि पर्दै थियो । आमा घरमा थिइनन् । बेलुकी सांझतिर घास काट्न पोखरी जानु भएको थियो । बहिनी र म बाटामा बनाएको झुप्रो भित्र कमिला खेल खेल्दै थियौ । सतिबेरका पातले थोपा धानेकै थिए । कहिले कमिलाको बिहे गर्दिन्थ्यौँ । माटाको भात पकाउंथ्यौँ र खाएजस्तो गर्थ्यौँ । यस्तै यस्तै ।
तर अचानक, पानी दर्कियो । ठुला ठुला थोपा खस्न थाले । भल बढ्न थाल्यो । कटेरोले ठुला थोपा थाम्न सकेन । सतिबेरका पात छेडेर थोपा हामीलाइ चुम्न आइपुग्यो । हामी दौडिएर दलिनको खाटमा बस्यौँ र बलेसिका बाछिट्टामा खुट्टा भिजाइ खेल खेल्न थाल्यौँ ।
बहिनी आत्तालिदै बोलि- 'थैलिका कमिला । ला, आटको बोट मुन्तिर राखेथे ।'
बहिनी रून थालि । म फकाउन । पानि केही मधुरो भएपछि बहिनी र म रुज्दै कटेरो भएतिर गयौँ । पुग्दा न कटेरो थियो, न थैलि । सबै बगाइसकेछ । ठुला ठुला भुल्का उठेका भलसंगै तल बासघारिसम्म गयौँ । किन भेटिन्थ्यो ? तल्लाघरे काकाले देखेछन् । बरू उल्टै गालि खाइयो । हकार्दै कराए -'माइलिका सन्तान कता कुदेका हँ ! चिसो लाग्छ । तल सल्लेनितिर पहिरो गयो भन्थे- झार्ला डफ्कातिर । आमा भर्खरै साइलिको घरमा घासको भारी ओत लगाएर चिन्ता पोख्दै थिइ ।
'केटाकेटी फेरी चिसोले बिरामी पर्ने भए ।'
कुरो २०६९ साउनतिरको ।
सुदुरपश्चिम जिल्ला, दार्चुलातिर । ०५८ सालतिर हाम्रो गाउतिर झैँ झरि सन्कियो । खोला उर्लिए । हाम्रो त कमिला र कटेरोमात्र बगाएथ्यो । बारी, पाखा, बन र सल्लेनीमात्र बगाएथ्यो । त्यहां त सदरमुकाम बगायो । मान्छे बगाए ।
यो त पश्चिमतिर केहि महिना अगाडिको एउटा दर्दानक उदाहरण थियो । यहाँ ७५ जिल्लाभरिनै यस्ता घट्ना तथा मानवीय समस्या भइरहेका थिए, छन ।
वास्तवमै, हामी कमिला जस्तै भएका, बनाइएका छौ । विश्वका मान्छेलाइ संम्भवत हामी कमिला जस्तै लाग्छ होला ? शहर बग्छ । संगै गास, बास र कपास । मान्छे पनि बग्छन् । तर....,
'त्यो दिन कमिलालाई हामिले बचाउन सकेनौँ ?'
'यहां बचाउन सक्दैनन् मान्छेलाइ'
सरकार दुइ, तीन करोड बाबालाइ दिन्छ । पत्रपत्रिकामा देखिन्छ । रेडियोमा सुनिन्छ । तर, समस्यामा परेका जनताका लागि न समयमै पैसा पुग्छ न राहत ।
कमिला बग्दा रोएकी बहिनीको चिन्ता मलाइ थियो । हाम्रो चिन्ता आमालाइ । हाम्रो सरकार त आमा नै थिइन नी !
'यहाँ मान्छे (जनता) बग्दा चिन्ता कसलाइ ?'
'किन हुन्थ्यो ?'
'सरकार जनतालाई संधै कमिला सम्झिन्छ'
Posted by Santosh Paudel at 12:07 AM No comments: Links to this post
संग न आवेग छ
इर्ष्या त छँदै छैन
न पूर्ण शान्त छ
शिथिल पनि छैन
Posted by Santosh Paudel at 12:05 AM No comments: Links to this post
'मन'संग न आवेग छन क्रोध इर्ष्या त छँदै छैनर पनिन प...